OoVimba beSitofu-Funda ukuRhweba
I-Dollar ithambisa i-NFP ayilunganga kangako, ukubuyiswa koQoqosho okunxulunyaniswe nokukhutshwa kwe-Vaccine
Ukuhlaziywa: 5 Februwari 2021
Idola yaseMelika yehle kakhulu ekuqaleni kweseshoni yaseMelika emva kokukhula okungaphantsi kokulindelweyo Intlawulo engekho kwifama, nangona intswela ngqesho yehla kakhulu. I-loonie iphantsi koxinzelelo oluthile emva kokucutha komsebenzi kulindelwe. Kodwa i-yen ikwindawo yesibini emva kwedola njengobuthathaka. Idola yase-Australia kunye ne-euro zizama ukubuyisa isikhundla sabo ngokuchasene nedola.
Inani labantu abaqeshwe kwicandelo lase-US elingezizo ezolimo ngoJanuwari lenyuke ngama-49,000 kuphela, ngaphantsi kokulindelweyo ngama-85,000. "Ukonyuka okubonakalayo kwemisebenzi kwiinkonzo zobungcali nezeshishini, kunye nakwimfundo yoluntu nakwimfundo yabucala, kuye kwahlawulwa ngelahleko kumacandelo ezolonwabo nawokubuk 'iindwendwe, ukuthengisa, ukhathalelo lwempilo, ezothutho kunye nokugcina impahla."
Nangona kunjalo, iqondo lokungabikho kwemisebenzi lehle laya kwi-6.3% ukusuka kwi-6.7%, ngcono kakhulu kunokuba bekulindelwe kwi-6.7%. Inani labantu abangasebenziyo lehla laya kwizigidi ezili-10.1. Inqanaba lokuthatha inxaxheba lihleli lingatshintshanga kuma-61.4%.
Umyinge wenzuzo ngeyure inyuke nge-0.2% MoM, ngaphantsi kokulindelweyo kwe-0.3% MoM. Kwaxelwa kwakhona ukuba intsilelo yorhwebo inciphise -66.6 yezigidigidi zeedola ngoDisemba. Isenzo sexabiso sangoLwesihlanu sicebisa ukuba indibano enkulu yale veki yayiqhutywa ngamathemba engxelo ye-NFP eyomeleleyo.
Ukubuyiswa kwezoqoqosho kunxulunyaniswe nokukhutshwa kweVaccine
USekela-Rhuluneli weBhanki yaseNgilandi uBen Broadbent uthe ukukhula koqoqosho okuqinileyo kulo nyaka kuya kuba "Iziphumo zokuqala kunyaka ophelileyo." Ukuthanjiswa komzimba kuya kuba nento yokwenza nokusasazwa kwesitofu sokugonya kunye nokuba banonophelo kangakanani abantu. Nangona kunjalo, inqanaba lentswela-ngqesho liya kulonwabisa xa iphela inkqubo yokuphela. Ngaphandle koko, imida eqinileyo yamazwe aphesheya iya kuchaphazela kakubi zombini iimfuno kunye nonikezelo kuqoqosho.
Isantya esicothayo sokugonya sihlala singunobangela wokukhathazeka. I-UK yaba lilizwe lokuqala eNtshona ukuvuma nokuphumeza i-Pfizer / BioNTech jab, kodwa ukuphunyezwa kuyasala. I-US inike ukukhanya okuluhlaza kunye ne-100% yenaliti yaseMelika eModerna, kwaye iyaqhubeka ngokudanisa ngokuthe chu.
I-European Union ihamba ngesantya esisezantsi ngokuthelekiswa noogxa bayo ekuvunyelweni nasekuhanjisweni. Ngelixa wonke umntu ezimisele ukunyusa imizamo yakhe, intsholongwane kungenzeka ihlale iphumelele kwikota yokuqala. Usulelo, ukulaliswa esibhedlele, kunye nokusweleka kunokwenzeka ukuba ziqhubeke nokudakumba okunyukayo, nto leyo ebangela ukuba abasemagunyeni bagcine amandongomane ekutshixweni.
tags ICoronavirus (COVID-19), Intlawulo engeyiyo yeFama (NFP), KwiDola yaseMelika, Igciwane
Idola yaseMelika iyancipha njenge-COVID-19 yeVenkile yokuKhulisa iiMarike zeNtengiso, iBrexit Optimism Propels GBP
Ukuhlaziywa: 14 Disemba 2020
Namhlanje, iimarike zehlabathi ziye zabuyela ngokukhawuleza kwimowudi yomngcipheko. Ikamva le-DOW lidlule ngaphezulu kwama-30,000 kwakhona njengoko ukuqaliswa kogonyo lwe-coronavirus sele luqalile. Kubonakala ngathi kukho inkqubela-phambili kwi-US Congress kukhuthazo lwezemali ngokunjalo. Idola liphantsi koxinzelelo lokuthengisa ngokubanzi, lilandelwa yiCanada kunye ne-yen ngalo mzuzu.
I-Sterling ivula ngaphezulu kakhulu njengoko iintetho zorhwebo zeBrexit zisiya kumhla wokugqibela wangeCawa. Iponti inyuka kancinci namhlanje ngokuchasene ne-euro kunye ne-Swiss franc. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba i-sterling ayigqobanga kuwo nawaphi na amanqanaba abalulekileyo oxhathiso. Abarhwebi bajikeleza nje iibhulukhwe ezimfutshane zabo. Iimakethi kwamanye amazwe zibambekile, zinobuthathaka bedola. Kodwa xa iyonke, urhwebo lucebile kwaye uninzi lwezibini lubekwe ngaphakathi kuluhlu lwangoLwesihlanu.
Iponti, kwelinye icala, ihlangana okokuqala njengoko iintetho zorhwebo zeBrexit zandiswa "enye imayile". Kukwabikwa ukuba umcebisi oyintloko we-EU uMichel Barnier uxelele oonozakuzaku be-EU ukuba isivumelwano singavalwa kwangoko kule veki. I-UK ixele ukuba yenza isivumelwano kukhuphiswano olufanelekileyo ngokutshintshisa imeko ethambileyo ye-EU kumalungelo okuloba.
I-Brexit Optimism Propels GBP
Abathathi-nxaxheba kwimakethi balwa nezihloko eziphambili zeBrexit kunye neendaba ezi-covid. Ngexesha lesiqingatha sokuqala sosuku, idola laliphantsi koxinzelelo olunamandla lokuthengisa, ukufumana kancinci ngexesha leseshoni yaseMelika. Nangona kunjalo, ivaliwe ngombala obomvu ngokuchasene uninzi lwembangi zayo eziphambili kwaye ihlala ibuthathaka.
Ngexesha lokurhweba kwakutshanje, iponti / idola yesibini yehlile kwindawo ye-1.3320-1.3330 phakathi kokungabikho kwezinto ezintsha zeBrexit okanye ezinye izinto ezichaphazela ukuhamba kwamaxabiso. Imali evaliweyo yorhwebo lwe-forex ngoMvulo nge-110 pips, okanye i-0.8%, inyuswe ngamathemba okuba isivumelwano seBrexit sisenokwenzeka emva kokuba i-EU kunye ne-UK igqibe kwelokuba iqhubeke nothethathethwano ngaphaya komhla "obekiweyo" wangeCawa.
Ngokobuchwephesha, kwizibini ezibalaseleyo, amanqanaba aphambili akakaphulwa. Ukuxhathisa kwangoko yi-1.3539 kwisibini se-GBP / USD. Ikhefu elizinzileyo kule ndawo liya kuvuselela imvakalelo yexesha elifutshane kunye nokuqhubeka nokuzuza okunamandla ukusuka kwi-1.1409.
tags Idili leBrexit, Covid-19, Idola yaseMelika, Iimarike zeStock zaseMelika, Igciwane
I-United States: I-Pfizer yokuhlaziya kwi-Vaccine, kwiNtengiso yezaBasebenzi kuXinzelelo njenge-Spikes Spikes
Ukuhlaziywa: 8 Disemba 2020
I-Pfizer ayinakukwazi ukunika amayeza amaninzi e-US kude kube nguJuni ozayo ngenxa yokuzibophelela kwamanye amazwe, njengoko kutshanje kuchazwe kwiindaba. Okwangoku, i-UK iya kuba lilizwe lokuqala ukwazisa nge-Pfizer / BioNTech coronavirus vaccine, eyabhengezwa ngurhulumente wase-UK ngeCawa. INkonzo yezeMpilo yeSizwe ithe iidosi zokuqala ziya kunikwa iingcali zononophelo lwempilo kunye namaBritane ngaphezulu kwama-80 ukuqala ngoLwesibini.
Kulindelwe ukuba malunga ne-800,000 yedosi iya kuhanjiswa kwiveki yokuqala. IPfizer kunye neBioNTech banokufumana imvume ye-FDA kwintlanganiso yabo ngoLwesine. Amakethi ajonge kwiziphumo ezinethemba kunye nokukhula ngokukhawuleza koqoqosho ngo-2021.
Isilumkiso sibuyele kwiimarike zehlabathi njengoko abatyali mali bezama ukulungelelanisa ithemba lokunyusa urhulumente kunye nokubhabha kwemali esembindini kunye nobunyani besi sifo xa iCalifornia ibhengeza izithintelo ezitsha zeshishini. ICalifornia lelona lizwe linabantu abaninzi eMelika noqoqosho lwayo olukhulu, ke oku kunokuba neziphumo ezibi ekubuyiseleni ilizwe liphela.
Intengiso yabasebenzi baseMelika kwiNkxwaleko NjengeePesenti zokunyuka kwamaxabiso
Inani lemisebenzi yase-US engeyiyo eyokulima (NFP) inyukile nge-7th inyanga ethe ngqo, kodwa isantya sokongezwa kwemisebenzi sehla kancinci ngo-Novemba.
I-30 yeminyaka yokuqhekeka-kwanexabiso lokunyuka kwamaxabiso e-US-umlinganiso wolindelo lweemarike zezemali koxinzelelo lwexesha elide-inyuke yaya kwi-2% ngoMvulo, ibetha elona nqanaba liphezulu phantse kwiinyanga ezili-19, iwela ngaphantsi kwe-1% ngo-Matshi.
Ukunyuka kwamvanje kokunyuka kwamaxabiso kunokunxulunyaniswa nolindelo lwenkuthazo yemali yaseMelika kunye nethemba lokufumana kwakhona ngokukhawuleza kwihlabathi jikelele kwizitofu ezinokubakho ze-coronavirus, kunye nokunyuka kwegolide, uthango lwesiqhelo lokunyuka kwamaxabiso.
Umongameli-onyuliweyo uJoe Biden uthe kwiveki ephelileyo urhulumente angaphinda aqhube olunye uvavanyo lwe-coronavirus yovavanyo kwiintsapho. Uqoqosho olukhulu lwehlabathi luyasokola kwigagasi lesibini le-coronavirus.
tags eunited States, Intengiso yabasebenzi baseMelika, Igciwane
IGold Selloff iyaqhubeka njengoko iponti yeSterling iphela iFirmer yeNyanga
Ukuhlaziywa: 30 Novemba 2020
Ukuthengisa ngokuqhubeka kwegolide namhlanje, ukophula uphawu lwe- $ 1,800 kunye nokufikelela kwi- $ 1,764.31 ukuza kuthi ga ngoku. Ukwehla okungaphezulu ngoku kulindelwe ukuba nje ukunganyangeki kubanjwe kwi-1,818.26 yeedola. Ukwehla okwangoku ukusuka kwi-2075.18 kubonwa njengokulungiswa kwayo yonke into evela kwi- $ 1,160.17.
USterling uqinise kancinci emva kokuba uNobhala Wezangaphandle wase-UK uDominic Raab ethe iingxoxo zeBrexit zibile Imicimbi emibini ephambili kuphela. Idola, idola yaseCanada, kunye ne-euro zibuthathaka. Nangona kunjalo, intshukumo ephambili inokufumaneka kwigolide, ethi ekugqibeleni ingene kwisiphatho se- $ 1,800.
Iveki exakeke kakhulu eneedatha ezingaphambili. Idatha ebalulekileyo ekufuneka uyijongile ibandakanya ukuqeshwa kwe-ISM kunye ne-US, i-eurozone CPI, iGDP yaseCanada kunye nengqesho; I-GDP yase-Australia; I-PMI yaseTshayina, njl. Isigqibo senqanaba leRBA kunye neNcwadi yeFed Beige akunakulindeleka ukuba zivelise iimpendulo ezininzi.
Alithandabuzeki elokuba ukusasazeka kwesitofu sokugonya kunye nesivumelwano seBrexit sinokuxhasa iponti. Kwaye ngoMvulo iyawa kusuku lwesibini ngokulandelelana. Iphume nge $ 1,764 nge-ounce, inqanaba layo eliphantsi kwiinyanga ezintlanu, emva koko yafumana kwakhona kodwa ayabinakho ukubamba ngaphezulu kwe- $ 1,780.
Ngaphambili kwiVaccine: Ukulindelwa kweNtengiso
Ngokubanzi, iimarike zizolile namhlanje ngokubhekiselele kurhwebo ekupheleni kwenyanga. Izitokhwe zikwindlala, azinandaba neendaba zezicwangciso zikaModerna zokufumana i-US kunye ne-EU imvume yesitofu sayo. Kwiimarike zotshintshiselwano lwangaphandle, i-sterling okwangoku zezona ndaba zilindileyo zeengxoxo zorhwebo zeBrexit.
USilvana Tenrejo, ilungu le-MPC leBhanki yaseNgilani, zamkela iindaba zophuhliso lwesitofu sokugonya se-coronavirus. Nangona kunjalo, akusayi kubakho kuphinda kubuye uqoqosho de izitofu zifumaneke ngokubanzi. Amakhaya anokulibazisa inkcitho de kugonywe ngenxa yeengozi zempilo.
Ngaphandle koko, uqaphele ukuba inkqubela phambili kwiimarike zabasebenzi iseyenye yemingcipheko emibi yokuhla komgangatho wexesha eliphakathi kuqoqosho lweBhanki yaseNgilani. Kwintlanganiso ephelileyo, uvotele ukuthanda ubungakanani bokomelela ukuze kukhuselwe ukuphazamiseka kwintengiso.
tags igolide, Pound Sterling, Igciwane
Isitofu sokugonya seCoronavirus sikhulisa umsebenzi weNtengiso ngeSuriment kwiBullish Sentiment
Ukuhlaziywa: 15 Novemba 2020
Iindaba zokulungela ukugonya zeCoronavirus yayiyeyona nto yayiqhuba umqhubi wentengiso kule veki iphelileyo, isomeleza imeko yomngcipheko yexesha elifutshane. Ukuhamba kwamaxabiso okulandelayo kweendleko eziphambili zehlabathi kubonakale kulungiswa ngokucacileyo, kudala isiseko sokukhula ngakumbi.
Imarike yemasheya ekugqibeleni ifumene iindaba ebezilindelwe ukusukela ehlotyeni. Isitofu sokugonya se-Pfizer esihle kakhulu se-COVID-19 sikhuphe kwimarike esele isomelele ngaphambi kokuvula. Kwiveki ephelileyo ngokuvula, ikamva le-S & P lenyuke ukusuka kumanqaku angama-60 ukuya kumanqaku ali-120.
I-franc yaseSwitzerland kunye ne-yen bagqibezela usuku ngokusebenza gwenxa, kwalandela idola yaseCanada, eya buthathaka kumaxabiso asezantsi eoyile. Idola yaseNew Zealand, idola yaseOstreliya, kunye neponti ezigqwesileyo zezona zinamandla. Idola kunye ne-euro yaphela ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukusebenza okungaginyisi mathe kuphando lobuchwephesha kwimarike kuthetha ukuthanda amaxabiso aphezulu ngo-2021, kodwa ukomelela okunamandla kunye neemeko ezikhulayo zokuthenga azikhuthazi ukuleqwa kwamaxabiso kwiiveki ezizayo.
Ngelixa iminqamlezo yen yagqibela ilandela isitokhwe kwaye yahlangana, uphuhliso lwaludanisa iibhere zeYen. Ngokukodwa, kubonakala ngathi ukwehla kweYen akuyi kuphakama ngaphandle kwentlanganiso ye-Nikkei eqhubekayo. Kukho ithuba lokuqhubela phambili ukucoca iYen kwisitokhwe. Enye inkcazo kukuba ukuvuselelwa kwemali yayiphambili "ngexesha" lobhubhane. Kodwa ngokufika kwezitofu zokugonya, itotshi inokubuyiselwa kumgaqo-nkqubo wezemali ukukhawulezisa ukubuyela okuzayo.
Ukusasazeka kwe-COVID-19 yokuXinzelela ukubuyela kuQoqosho
Idatha ekhutshwe kule veki iya kubonisa ukuba uqoqosho lungene ekuweni ngokuqinileyo. Iingxelo ngoMvulo nangoLwesibini kulindeleke ukuba ziqinisekise ukuba ukubuyela ngokukhawuleza okukhawulezileyo kunye nokomeleleyo kwiimarike zezindlu zaseCanada kuyaqhubeka. Iingxelo zangaphambili ziqaphele ukuba imisebenzi ihleli kumanqanaba erekhodi ngaphandle kwempawu zomsebenzi obuthathaka kwezinye iimarike zekhondomu.
Idatha ekomishini yezindlu ngolwe-Lwesibini inokubonisa amaxabiso aphakamileyo kakhulu ngonyaka wama-240 amawaka ngo-Okthobha, inikwe ukwanda kwenani leemvume zokwakha kwinyanga ephelileyo (271 amawaka).
Kwaye ngelixa iindaba zokugonya zibonisa ukuba kukho ukukhanya ekupheleni kwetonela, iimeko ezihlaziyiweyo ze-COVID kunye nokubanakho kwezithintelo eziqinileyo zihlala zisoyikiso olukhulu ekubuyiseleni uqoqosho kwixesha elisondeleyo. Ukukhula koqoqosho kungathi gingxi kwi-Q4 kulo nyaka, ngokukhula kumacandelo kunciphe amathuba okuba kuchaphazeleke ngamanyathelo okuthintela, afana nokuthengisa kunye nokuvelisa, ukuze kulungiswe kukudodobala kwamanye amacandelo eenkonzo esele zinzima. ezifana neeresityu neehotele.
tags Covid-19, Igciwane
Iimbuyekezo zeDollar Bulls njenge-Vaccine Optimism Lifts Sentiment
Ukuhlaziywa: 25 Agasti 2020
Ukuqala kweveki kwintengiso yotshintshiselwano lwangaphandle kwakudika, njengoko ezona zibini ziphambili zahlala zikumanqanaba aqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukhetho lwanikwa umngcipheko. Izalathiso zehlabathi zibonise ukukhula okubonakalayo, ngokukhula kuqhutywa ziindaba ezikhuthazayo ezivela eMelika.
I-FDA ivumile ukuba kusetyenziswe iplasma yokubamba ukunyanga iimeko ezinzima ze-coronavirus, esele isetyenziswa kwamanye amazwe.
Okwangoku, iTikTok imangalela ulawulo lukaTrump malunga nesigqibo esenziwe nguMongameli wase-United States sokuvala le app e-United States, inkampani isithi ayinalo ithuba lokuzikhusela.
I-EUR / i-USD kunye ne-GBP / i-USD ithumele i-intraday yangaphakathi kodwa yaphelisa usuku ngelahleko, kufutshane neveki ephelileyo. Iimali ezithengiweyo zorhwebo nazo zalahlekelwa ngumhlaba zaza zawela kwiveki ephelileyo xa zithelekiswa nedola, ngandlela thile zibonisa ukuba idola isengukumkani.
Akukhange kubekho kuphumelela.
Igolide iyaqhubeka nokuwa. Ixabiso lesinyithi elixabisekileyo laliyi- $ 1,925 nge-ounce nganye. Amaxabiso eoyile aluhlaza awele kuluhlu olwamkelekileyo.
Ithemba kunyango lweCoronavirus
Imvakalelo yentengiso ibonakala ngathi iphuculwe, ngokuyinxenye ngenxa yeendaba zenyathelo likaMongameli wase-US uDonald Trump lokukhawulezisa ukugonywa kwe-UK ngokuchasene ne-COVID-19 ngaphambi kokhetho. I-Financial Times ixele ukuba enye indlela kukusebenzisa “Isigunyaziso esingxamisekileyo” Ngo-Okthobha ukulungiselela isitofu sokugonya esenziwe yi-AstraZeneca Plc kunye neDyunivesithi yaseOxford. Ukusetyenziswa kuya kusekelwa kwiziphumo ezivela kufundo oluncinci lwase-UK.
I-White House yenqabile ukuphawula ngale ngxelo. Isithethi seSebe lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu sithi iingxelo zokusetyenziswa kwe-EUA ngaphambi kokhetho "zibubuxoki ngokupheleleyo". Endaweni yoko, abaphathi babenethemba lokufumana isitofu kwikota yokuqala ka-2021. I-AstraZeneca ikwalile neengxoxo norhulumente malunga nemvume engxamisekileyo.
tags Covid-19, KwiDola yaseMelika, Igciwane